InsideView Solika Fahombiazana mandeha amin'ny tsena miaraka amin'ny fahiratan-tsaina kendrena | Martech Zone
Ny tsindry amin'ny CMO dia miakatra haingana satria omena torolàlana bebe kokoa izy ireo andraikitra amin'ny fitomboan'ny vola miditra, ao anatin'izany ny teti-bolan'ny teti-bola sy rafitra bebe kokoa hanatanterahana izany. "Tsara," hoy ianao! Ary farany manaja ny mpivarotra. Saingy ny fanamby dia izao izy ireo no tompon'andraikitra bebe kokoa amin'ny famoahana valiny azo refesina - ary haingana.
Ny sakana lehibe tsy ahazoana fahombiazana dia ny ekipa mpivarotra tsy manana fahaiza-manao ilaina ilaina handrefesana ny fiantraikany amin'ny fitomboan'ny vola miditra ao amin'ny fikambanana (ohatra ny fampahalalana vaovao mba handaminana ny drafitra tena izy, ny fanatanterahana ary ny fitantanana ny tetikadin'izy ireo eny an-tsena). Io elanelam-baovao io dia mamela ny mpitondra marketing tsy afaka mamaly ireo fanontaniana lehibe momba ny fitomboana, toy ny: Iza amin'ireo fizarana tokony hokendrentsika? Tsena mifanila inona no tokony hivelarantsika? Hatraiza ny fahombiazantsika amin'ny fahazoana mpanjifa izay mifanitsy amin'ny mombamomba ny mpanjifa tsara indrindra?
Ankoatr'izay, ny C-suite malalaka kokoa dia tsy manana fomba haingana sy azo itokisana hahitana ny fomba fanatanterahan'ilay orinasa mifanohitra amin'ny paikadiny mandeha eny an-tsena mba hahafahan'izy ireo manitsy ny làlana. Inona ny valiny tsy trandrahana fotoana mety hampiakarana ny fitomboan'ny laharana ambony.
Vahaolana momba ny fitsirihana kendrena InsideView
InsideView dia manampy ny orinasa hamaritra ny paikadiny amin'ny tsena manomboka amin'ny volavolan-dalàna mankany amin'ny fomba kendrena kokoa. ny Sehatra fitsikilovana kendrena manampy ny ekipa mpivarotra sy varotra hamantatra haingana sy hahafeno ireo tanjona kendrena tsara indrindra, hifandray amin'ny fifampiraharahana bebe kokoa, hanakatona fifanarahana bebe kokoa ary hitazona sy hanitatra kaonty.
Targeting Intelligence no fototra
Tsy ampy ho an'ny orinasa B2B ny miankina amin'ny lisitra kendrena nofaritan'ny firmographics fototra. Ny Targeting Intelligence dia mamaly ny fanontanian'ny iza, ny antony, oviana ary ny fomba kendrena amin'ny alàlan'ny fanomezana kaonty mitarika indostrialy sy angona fifandraisana, vaovao ara-potoana sy fomba fijery ara-tsosialy ary sary misy fifandraisana feno izay mampiseho ny fifandraisanareo sy ny mpiara-miasa aminao. fanantenana sy mpanjifa. InsideView's Targeting Intelligence Platform dia mampiasa ny fianarana milina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy hampiasa famantarana sy data isa ary an-tapitrisany ny triangulateur isaky ny fampahalalana mba hahazoana antoka fa marina sy feno.
InsideView manome hery ny varotra sy ny fanatanterahana marketing
Ny fampiharana ara-asa ao SaVa's SaaS dia mametraka ny herin'ny Targeting Intelligence mivantana amin'ny fizotran'ny varotra sy ny marketing ary miditra am-pilaminana amin'ny rafitra Marketing Automation sy CRM.
InsideView Target - Manamboara lisitry ny fanantenam-bolo tena namboarina mba hampifandraisana ny mpanjifa mety amin'ny hafatra mety.
InsideView Enrich - Ny fanampiana fanampiny dia misy data fanampiny mba hahitana fomba fijery tsara kokoa momba ny vinavinanao.
Fivarotana InsideView - Mitadiava, mahatakatra ary mifandraisa amin'ireo kaonty mety sy mpanapa-kevitra hanakatonana fifampiraharahana haingana kokoa.
InsideView Refresh - Diovina ho azy sy amboary ny angona CRM anao handrehitra ny fahombiazana amin'ny varotra sy marketing.
InsideView API - Ampiasao ny lalànan'ny InsideView Targeting Intelligence amin'ny alàlan'ny fampidiranao azy amin'ireo fampiharana anao.
Serivisy manam-pahaizana InsideView hitari-dalana anao
InsideView dia mpiara-miasa matoky ho an'ny mpanjifa B2B izay mitady fanampiana amin'ny hetsika ataon-dry zareo mankany an-tsena. Orinasa maro no manamaivana ny fahasarotana manodidina ny angon-drakitra. Ny serivisy Expert InsideView dia miainga amin'ny fanampiana ireo tetikasa kalitaon'ny angona toy ny fanadiovana, ny fanamafisana ny mailaka ary ny fampifandraisana, hatramin'ny serivisy fakan-kevitra bebe kokoa toa ny Target Market Analytics, izay manampy ny mpanjifa hamaritra ny tsenany feno azo adika (TAM).
Ity serivisy ity dia manome console visualization data izay ahafahan'ny mpanjifa mihazakazaka scenario "what-if" amin'ny fotoana tena izy ary mandray fanapahan-kevitra varotra miorina amin'ny kaonty Fifidianana kaonty (ABM), ny drafitry ny faritany ary ny fanitarana ny tsena kendrena.
Fikirakirana fanao tsara indrindra amin'ny faharanitan-tsaina
Inona no fomba tsara indrindra hanatanterahana ny paikady mankany amin'ny tsena kendrena toa ny ABM? Hainay fa ny mpivarotra B2B voalohany dia manaraka dingana telo mba hahazoana antoka fa mandray anjara amin'ny fitomboan'ny vola azo refesina izy ireo.
Fantaro tsara ny tanjonao - ary manana ny angona hahatratrarana azy ireo. Azonao atao ny misafidy ny kaontinao mpivarotra (ary matetika eto no manomboka ny orinasa), fa ny fizotrany dia tokony ho ny marketing. Ny marketing dia voaofana hampihatra ny safidin'ny tsena kendrena amin'ny sehatry ny indostria, persona ,, ary anjara asa. Ny famaritana ny mombamomba ny mpanjifa (ICP) anao no dingana voalohany hananganana tetikady kendrena mankany amin'ny tsena kendrena. ICP no mason-tsivana fampiasanao hampiasaina handrefesana raha toa ny prospect no mety indrindra amin'ny orinasanao. Ny fari-pitsipika mahazatra dia misy ny angon-drakitra hentitra (ohatra ny indostria, ny habeny, ny jeografia), ny lohateny kendrena sy ny andraikitra, ary na ny fepetra maha-kalitao aza, toy ny hoe manavao ny orinasa na ny orinasa laggard.
Raha vantany vao fantatrao ny ICP anao dia azonao ampiasaina ireo toetra ireo mba hamantarana ny tsena totalinao (TAM) ary hamaritana ny haben'ny tsenanao kendrena. Ampahafantarin'ny TAM anao hoe firy ny orinasa mifanentana amin'ny ICP anao ary manombatombana hoe ohatrinona ny lehibe ateraky ny tsena eo alohanao. Hitan'ny InsideView fa maro amin'ireo mpanjifanay no naka latsaky ny 10% ny TAM ao amin'ny tahiry marketing. Ilay banga tsy hita io dia antsoina hoe fotsy. Raha vantany vao hitanao ny faritra fotsy, dia afaka manomboka manafatra tanjona vaovao net ianao ary manitsy, manadio ary manampy tahiry tsy ampy amin'ny lasibatra efa ao anaty data-nao.
Ny famaritana ny ICP sy ny TAM anao dia manakiana sy fototra mafy ho an'ny paikady kendrena mankany amin'ny tsena sy ny fahombiazan'ny ABM. SiriusDecision dia nanampy vaovao Soso-kevitra "Target Demand" eo an-tampon'ny riandrano fangatahana malaza ataon'izy ireo, manamarina izany filàna izany. Ankoatr'izay, nanao fanadihadiana izy ireo izay naneho fa mihoatra ny antsasaky ny orinasa ankehitriny no manana aotra hatramin'ny famerana voafetra ny TAM-ny.
Tazomy ho amin'izao fotoana izao ny angon-drakitra kendrenao. Ny kaonty B2B sy ny fifandraisana dia lo amin'ny fomba haingana dia haingana. Araka ny fanadihadiana maromaro dia eo anelanelan'ny 30-70% isan-taona. Noho izany, ny fitazonana ny kalitaon'ny database dia tokony hatao laharam-pahamehana ho an'ny orinasa rehetra. Io olana io dia miharatsy amin'ny ABM, izay mametraka premium amin'ny fitazonana ny kaonty kendrenao hiatrika ny zava-misy fa mety hiova ny laharam-pahamehan'ny kaontinao, mety hiova ny tsena, ary mety hahita vaovao vaovao ianao izay manampy anao hampisondrotra ny mpanjifa, andraikitra na hetsika mety. famantarana izany filàna izany. Hihazakazaka ihany koa ianao amin'ny toe-javatra ialan'ny olona na ialàny andraikitra, na iarahan'ny orinasa mandamina sy manova andraikitra. Ny fitazonana ny angon-drakitrao hatrany no fomba tokana ahazoana antoka fa tsy miovaova ny tanjona kendrenao. Rehefa mianatra bebe kokoa ianao dia mahita fa ny tsingerin'ny varotra dia fohy kokoa ho an'ireo orinasa latsaky ny $ 1 miliara amin'ny fidiram-bola. Azonao atao ny mamindra ny tanjona 500 ho 1 tapitrisa $ 1 miliara amin'ny fidiram-bola, avy eo diniho ireo manana fidiram-bola mihoatra ny $ 500 miliara ho ambaratonga 1. Ny fananana angon-drakitra fidiram-bola vao haingana sy marina amin'ny lasibatra rehetra no hany fomba ahafahanao manitsy haingana ny ezaka ataonao sy mikendry ilay kaonty tsara indrindra miaraka amina hafatra namboarina kokoa.
Ampiasao ny ABM hampifanarahana ny varotra sy ny marketing mba hahombiazana faran'izay betsaka. Ireo fikambanana misy ekipa marketing sy varotra mifanindry mafy dia nahatratra 24% fitomboana fidiram-bola haingana sy 27% vola azo haingana kokoa tao anatin'ny telo taona, araka ny SiriusDecision. Nianarantsika tamin'ny a fanadihadiana mihoatra ny 1,000 sales sy mmpitondra fiara ireo fikambanana manao asa avo lenta dia mampiseho tanjaka amin'ny sehatra ifantohana efatra izay ifotoran'ny fampifanarahana: fahaiza-mifampiresaka, fandrefesana ny fantsom-piraisana iraisana, ny fanarahana ny kalitao hitarika, ary ny fampiroboroboana ny angon-drakitra mba hitarihana fahitana fahombiazana. mifanaraka tsara kokoa. Araka ny voalaza etsy ambony ao amin'ny # 1, ny fifantenana kendrena ABM dia tokony ho entin'ny marketing, fa azo antoka fa tsy midika izany fa ny marketing irery no tokony hanao azy. Ho fanampin'ny asany lehibe amin'ny fivarotana, ny fidirana amin'ny vinavina, ny hierarchies fitetezana ary ny fifampiraharahana farany, ny mpivarotra dia manana tsena, indostria ary fahalalana hafa tsy maintsy ampidirina satria ny marketing dia mampivelatra ny ICP ary mikendry kaonty tsirairay. dingana voalohany amin'ny ABM dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa sy ny fihainoana ny traikefa amin'ny varotra. Ohatra, angamba ny marketing dia mikendry ny haavon'ny VP, saingy ny varotra dia nahatsikaritra fa, raha mahazo miresaka amin'ny VP izy ireo, matetika dia voaroaka hatrany amin'ny sehatry ny tale. Ary rehefa mandroso ny ABM, ny marketing dia hiasa akaiky kokoa amin'ireo ekipa mpivarotra amin'ny kaonty tsirairay. Rehefa samy manana ny anjarany amin'ny fampivoarana ny paikadin'ny ABM ny roa tonta dia azo antoka fa hiara-hiasa amin'ireo singa fototra rehetra mitondra fifampiraharahana lehibe amin'ny tsipika farany.
Rehefa mijery ny fitomboan'ny fidiram-bola ianao, dia ampiasaina koa ny tsena feno (TAM) handrefesana ny haben'ny tsena vaovao hidirana, hanamarinana na hanitarana ny fampiasam-bola amin'ny tsena ankehitriny, na hikarohana ireo vokatra vaovao momba ny fanavaozana vokatra. Na izany na tsy izany, ny fananana fomba fijery marina ny TAM dia zava-dehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara indrindra. Ny fakana sary an-tsaina ny tsenanao dia manampy amin'ny famaritana faritany fivarotana, fizarana loharanom-bola amin'ny varotra an-tsaha sy fampiasam-bola amin'ny programa, ary fifantohana amin'ny ezaka ara-barotra amin'ny ROI faran'izay betsaka.
Ireo mpitarika marketing izay te hampamoahina amin'ny fitomboan'ny fitomboana dia tokony hanana am-polony mahery amin'ny tsenany lasibatra ary hampiasa ny faharanitan-tsaina kendrena handrehitra ny fanatanterahana azy ireo eny an-tsena. Mijanona eo amin'ireto toro-hevitra famaranana ireto:
Ny famaritana ny ICP sy ny TAM anao dia fototra iorenan'ny varotra miorina amin'ny kaonty programa ary manakiana ny fahombiazany.
Ny TAM dia tsy fandraisana andraikitra indray mandeha. Dingana mitohy io ary mivoatra rehefa mitombo ny orinasanao. Tombano isan-taona farafahakeliny ny ICP sy ny kaonty kendrenao.
Ampiasao ny TAM hahazoana ny varotra sy ny marketing mifanaraka amin'ny tsena sy ny mpanjifa tadiavinao. Ny fomba mora hampifandray ny ekipanao dia amin'ny alàlan'ny fakana sary an-tsaina ny TAM anao mba hiaraha-miasa miaraka amin'ny tranga misy raha manapa-kevitra haingana.
Tazomy ny angon-drakitrao ankehitriny ary aza manadino ny fahadiovan'ny data. Tsarovy fa ny angona B2B amin'ny kaonty kendrena dia miova matetika rehefa miova ny anjara toeran'ny olona, ​​manitsy ny paikady ary miova ny tsena amin'ny ankapobeny.
Infographic: Mitadiava, kendreo ary ampandraiso amin'ny tsena 4 tsotra ny tsenanao feno adiresy
Sintomy ny e-book: Fantatrao ve ny tsena feno adiresy? Dingana 3 hanavaozana ny fomba fitetezana anao mankany amin'ny tsena
Sintomy ny eBook anay
Tags: abmmarketing miorina amin'ny kaontyb2bfirmagraphicICPanaty anatinyinsideview apisinsideview enrichfamelomana anatinyvarotra anatinytanjona anatinypersonafenolayer fangatahana kendrenafaharanitan-tsainalasibatratsena feno adiresy
Fomba fampiasa ny pejin'ny vokatra App Store Mobile Poloney amin'ny alohan'ny fanombohana
10 Aogositra 2017 amin'ny 12:09 PM
Misaotra betsaka tamin'ity lahatsoratra ity